Momba anay - Xinpan Metal Wire Mesh Products Co., Ltd.
Xinpan Metal Wire Mesh Products Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny "Hometown of Wire Mesh in China" -Anping, Hebei, miaraka amina fitaterana mety. Izy io dia harato tariby nohomboina nohomboana nohomboina, hodi-kazo mihodina, famokarana, fanodinana ary fivarotana. Mpanamboatra stent. Taorian'ny fikarohana sy fanavaozana an-taonany maro, ny orinasan-tsika dia manohy mampiditra vokatra vaovao. Izahay dia manizingizina ny fanavaozana ny teknolojia, ny fitantanana siantifika ary ny fitantanana tsy fivadihana, mitandrina amin'ny fampidirana ireo haitao mandroso sy famokarana mandroso, hampiroborobo ny famokarana manara-penitra, ary mifehy fatratra ny rohy fototra toy ny fividianana akora, ny fitantanana ny famokarana ary ny fitsapana ny vokatra mba hahazoana antoka hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa izahay.
Ny orinasa dia mamokatra matetika: tariby nohomboina nohomboina, valizy mihodina tariby, fonosana ary vokatra harato hafa. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny herin'ny tafika, fonja, masoivohon'ny governemanta, banky, ary koa trano onenana, trano tsy miankina, villa, varavarana sy varavarankely, làlambe, arofanina amin'ny lalamby, tsipika misy sisintany ary saha hafa. Vonona izahay hanompo ny mpanjifantsika amin'ny foto-kevitra "faran'izay tsara, fandefasana haingana, vidiny mirary ary serivisy tsara". Miaraka amina vokatra avo lenta, laza tsara ary serivisy avo lenta, dia amidy amina tanàna lehibe sy salantsalany ary kely manerana ny firenena sy ampitan-dranomasina ny vokatra. Ny orinasanay dia vonona ny hiara-hiasa amin'ny mpivarotra anatiny sy avy any ivelany amin'ny fiaraha-miasa mandresy, fandrosoana iraisana, ary hamorona mamirapiratra!
Tanjona orinasa: Mamorona tombony sy fampandrosoana maharitra
Paikadin'ny orinasa: Mametraha tombony amin'ny fifaninanana maharitra
Enterprise Tenet: manompoa ny firenena amin'ny indostria, mamelombelona ny firenena amin'ny teknolojia
Fandraharahana: firaisana, fanoloran-tena, fikatsahana ny hatsarana
Hevi-dehibe: Tian'ny tompokolahy ny talenta ary alaina amin'ny fomba mety
Hevi-pitantanana: ny tsena no mpitondra, ny talenta no fototra; ny fanavaozana no hery manosika, ary ny indostria no tohana
Filôzôfia momba ny fitantanana: Ireo manana fahaiza-manao dia manana ny toerany, ireo izay miasa dia manana ny fananany manokana; ny fizarazarana ny asa dia tsy maintsy mazava, ary ny fahombiazana no lohalaharana
Filôzôfia momba ny varotra: azo sokafana hatrany ny tsena, fa tsy fanahy iniana fotsiny ny tsy fahombiazana
Hevi-dehibe momba ny serivisy: Mandresy ny tsena ny serivisy, mitondra tombony ny fahafaham-po
Hevitry ny mpiasa: fanentanana momba ny krizy, fanentanana momba ny kalitao
Tanjona ara-bola: loharano misokatra ho an'ny rehetra, ajanony ny fandaniana amin'ny toerana rehetra